Tapered-roller bearings - China Anrui Nihazonako Group
Deep Groove baolina bearings
Other namboarina bearings
Fitaovana fampitana bearings
Tapered-roller bearings indrindra hitondra radiala-monina radiala sy axial mitambatra entana. Axial entana afaka mitondra ny laharana tokana tapered-roller bearings miankina amin'ny fifandraisana fiolahana izany hoe zoro ny peratra ivelany raceway, ny lehibe kokoa ny fiolahana lehibe kokoa ny mitondra capacity.Tapered-roller bearings no afaka hitondra entana eo amin'ny iray axial tari-dalana sy ny hametra axial fifindran ny lavaka ary ny trano fonenana ao amin'ny tari-dalana iray. Raha oharina amin'ny fifandraisana angular baolina bearings, tapered fahaiza-roller bearings Loading ...
Tapered-roller bearings indrindra hitondra radiala-monina radiala sy axial mitambatra entana. Axial entana afaka mitondra ny laharana tokana tapered-roller bearings miankina amin'ny fifandraisana fiolahana izany hoe zoro ny peratra ivelany raceway, ny lehibe kokoa ny fiolahana lehibe kokoa ny mitondra capacity.Tapered-roller bearings no afaka hitondra entana eo amin'ny iray axial tari-dalana sy ny hametra axial fifindran ny lavaka ary ny trano fonenana ao amin'ny tari-dalana iray. Raha oharina amin'ny fifandraisana angular baolina bearings, tapered-roller bearings Loading fahafahana dia lehibe kokoa, mametra ny hafainganam-pandeha dia ambany. Tapered-roller bearings dia be ampiasaina amin'ny fiara, nanakodia fikosoham-bary, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, mpampatsiro hanina, fitaovana plastika sy ny orinasa hafa.
Normal-jaza Basic Load Factor mametra Baolina mitondra
Dimensions naoty hafainganam-pandeha famenon'ny Weight
(Eo ho eo.)
D D B, C Cr Kor fo Gresse Oil No. Size Weight
Basic MG MG MG kn kn isa-minitra isa-minitra MG kg
30302 15 42 14,25 13 11 23.2 21,6 9.6 9900 13000 0,094
LM11749 / 10 17,462 39,878 13,843 14,605 10,688 23.8 24,2 0,29 10000 13000 0,084
32204 20 47 19,25 18 15 36.5 39.5 12.5 8800 12000 0,16
M12649 / 10 21,43 50,005 17,526 18,288 13,97 38,5 40 0.28 8000 11000 0,169
L44643 / 10 25,4 50,292 14,224 14,732 10,668 28.8 34 3.3 7400 10000 0,13
L44649 / 10 26,988 50,292 14,224 14,732 10,668 28.8 34 3.3 7400 1000 0,12
329013 29 50,292 14,224 17,6 10,668 26.8 34 10.8 14000 17000 0,116
32006 30 55 17 17 13 37.5 46,5 13.5 6900 9200 0,166
LM48548 / 10 34,925 65,288 18,034 18,288 13,97 47.5 57,5 3.1 5700 7600 0,249
30207 35 72 18,25 17 15 55,5 63.5 15.3 5500 7400 0,328
32009 45 75 20 20 15.5 58,5 76,5 16.5 4800 6400 0,346
30309 45 100 27,25 25 22 111 129.8 21,3 4000 5300 0,984
30214 70 125 26.5 24 21 131 162 25.5 2900 4000 1,26
Previous: Other namboarina bearings
Manaraka: 8AT1 Automobile bearings
Gardening Fitaovana Bearings Factory
Gardening Fitaovana Bearings mpanamboatra
Gardening Fitaovana Bearings Supplier
6808 namboarina hafa bearings
8AT planeta pinion zana-tsipìka voalambolambo -1
8AT planeta pinion zana-tsipìka voalambolambo -2
6909 namboarina hafa bearings
Anrui Nihazonako Group Co., Ltd.